Lakkoofsi fuulaa ammaa, dirree kan kabala haalojii keessatti mul'atu. Lama-cuqaasuun Naanna'aa isa ati galmee kee keessa itiin naannooftu bana. Mirga-cuqaasuun toorbarruu galmee kee keessaa mara mul'isa. Qaree barruu iddoo toorbarruutti qubachiisuuf, toorbarruu tokko cuqaasi.
Akkaataa Fuula Ammee
Akkaataa fuula ammee mul'isa. Akkaataa gulaaluf lama cuqaasi, akkaataa biroo filuuf mirga cuqaasi.
Yoo jijjiiramne galmee hanga ammattti ol hin kaa'amne, "*" dirree kabala haalojii kana keessatti mul'isa. Kunis haarawaaf fayyada, galmeewwan olkaa'ameefii miti.
Dabalataanis Mallattoowwan Lakqurxaawaa ilaali.
Guddisaa fi Toorii Mul'isi
Too'annaawwan sadii Kabala Haalojii Barreessaa irraa, guddisaa fi teesumaa mul'annoo kan galmeewwan barruu keetii akka jijjiirtuu siif hayyama.
Agarsiifamnii sajoowwan Toorii Mul'annoo bitaa irraa gara mirgaatti:haalataan mul'annoo fuula hedduu cinaa cinaan haalataan kitaabaa fuuloota lamaa akka kitaaba banaa keessaa haalata tarjaa baaqqeen
Fuuloota dabalataa mul'isuuf islaayiderii guddisaa gara bitaatti harkisi, fuula keessatti guddisuuf fi bal'ina fuulaa xinneenyaan mul'isuuf gara mirgaatti harkisi.
Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.
Title is: Kabala Haalojii